ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | Data Recovery
နေအိမ် → ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
Data Recovery န်ဆောင်မှုများ:
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာဆယ်တင်ရေးဓာတ်ခွဲခန်းမှသာသင့်လျော်သောအထူးကုထိခိုက်မခံတဲ့သတင်းအချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်သေချာစေရန်ပုဂ္ဂလိကနှင့်ထိန်းချုပ်ထားသောဓာတ်ခွဲခန်း access ကိုထားရှိမည်အားလုံးဖောက်သည်ဒေတာနှင့်အတူလုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်. ကျနော်တို့မှန်မှန်အစိုးရလျှို့ဝှက်ဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ကန်ထရိုက်နေကြတယ်, ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ. LC နည်းပညာပစ္စည်းများလိုအပ်ခွဲခြားကြောင်းလုံခြုံရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အဆင့်အထိနေသားတကျဖြစ်ပါသည်. အားလုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်စာရွက်စာတမ်းများအပြီးအပိုင်ပြီးနောက်သုတ်နေကြ 30 ရက်ပေါင်း.
ရည်ရွယ်ချက်: LC နည်းပညာအင်တာနေရှင်နယ်ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒကကြေညာချက်ကျနော်တို့အသုံးပြုသူများထံမှစုဆောင်းငါတို့သည်အဘယ်သို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသတင်းအချက်အလက်တစ်ခုလမ်းညွှန်အဖြစ်ရေးသားခဲ့. ကြှနျုပျတို့သညျဤသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ရေးသတင်းအချက်အလက်တစ်ခုပညာတတ်များနှင့်အဆင်ပြေဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်ခံစားရ. သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုမှတ်ချက်များသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကကျွန်တော်တို့ကို Service@LC-Tech.com မှာသိစေကျေးဇူးပြုပြီး.
စာရင်းအင်းများခြေရာကောက်: LC နည်းပညာလည်ပတ်4ဆိုဒ်များကိုလက်, www.LC-Tech.com, www.LC-Tech.co.uk, www.FILERECOVERY.com နှင့် www.PHOTORECOVERY.us အားလုံးက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းဇယားကိုခြေရာခံ. ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်များထိုကဲ့သို့သော Google Analytics နဲ့ Bing မှ Analytics ကဲ့သို့ဝန်ဆောင်မှုများကိုခြေရာခံ analytics အသုံးချရန်.
ဤဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သောရှုမြင်ကြသည်စာမျက်နှာများအဖြစ်ငါတို့အဘို့အစာရင်းဇယား generate, အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသူတို့ရှုမြင်, session ကိုအချိန်နှင့်အခြားစာရင်းဇယား. ဤအချက်အလက်ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းသာပိုကောင်းအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အသုံးပြုသည်.
ငါတို့, အခါသမယစာရင်းထဲမှာပေါ်မှာငါတို့ site ကိုပေးထားသောအချိန်ကာလအတွင်းကိုင်တွယ်ထားသည်မည်မျှဧည့်သည်များသို့မဟုတ် hits, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ IP လိပ်စာများကိုမတိကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်သာဒေသဆိုင်ရာဒေသစစ်တမ်းများအသုံးပြုသည်နှင့်မသိမ်းထားပါ, မဟုတ် shared.
ကျနော်တို့မည်သူမဆိုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာရောင်းမပါဘူး — ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းသာအသုံးပြုသည်.
ကွတ်ကီး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ၏ e-commerce ကိုဧရိယာထဲမှာ cookies များကိုသာအသုံးပြုနိုင်သည်. ကွတ်ကီးအတွက်စျေးဝယ်လှည်း contents တွေကိုနှင့်ဝယ် session ကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်ရန်အသုံးပြုကြသည်. အဆိုပါ cookies တွေကိုလည်းအလိုအလြောကျပုံစံများကိုအကူအညီဝစွာအသုံးပြုကြသည်. အဆိုပါ cookies များကိုတစ်ဦးရက်အနည်းငယ်အတွင်းမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များပေးပို့နှင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးကြဘူး.
လူဦးရေအချိုးအစားပြန်ကြားရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတောင်းဆိုခြင်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်အချို့ဒေသများရှိကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတောင်းဆို; ဒီမိုများ download လုပ်သည့်အခါ, သတင်းအချက်အလက်မေတ္တာရပ်ခံနေသည်, ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူနေကြသည်, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုမေတ္တာရပ်ခံသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာမှစာရင်းသွင်းခြင်းမေတ္တာရပ်ခံနေသည်. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုနှင့်အတူ, ငါတို့သည်လည်းအခြေခံလူဦးရေအချိုးအစားသတင်းအချက်အလက်နှင့် / သို့မဟုတ်သင်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါပြဿနာများ၏ဖော်ပြချက်တောင်းဆိုရန်. အားလုံးမေးလ်စာရင်းများကိုရွေးရသည့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အသုံးပြုသူချက်ချင်းဖယ်ရှားခံရဖို့ Unsubscribe@LC-Tech.com မှ e-Mail ကိုပို့ခြင်းအားဖြင့်အချိန်မရွေးနှုတ်ထွက်နိုင်ပါတယ်.
ကျနော်တို့ကောက်ယူစုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါကိုဘယ်လို: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ကောက်ယူမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်, အသုံးပြုသူကတင်ပြပါသို့မဟုတ်စာရင်းဇယားဆာဗာကစုဆောင်းရှိမရှိလူဦးရေအချိုးအစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့အတွက်အိမ်သူအိမ်သားတင်းကြပ်စွာကိုအသုံးပြုသည်, ထုတ်ကုန်တိုးတက်မှုနှင့်မြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို. ကျနော်တို့ဘေးဖယ် e-Mail ကိုသောတစ်ဦးကိုလစဉ်သတင်းလွှာများပြုပါ. ကျနော်တို့ကိုစပမ်သို့မဟုတ်အမြောက်အများက e-Mail ကိုကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်ကြော်ငြာကိုမကျင့်မဟုတ်သလိုကျမတို့ကလည်းဘယ်တတိယပါတီလူပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသည်, ငါတို့၏စာရင်းရောင်းချသို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေကြပါ.
အဘယ်သူသည်ကျနော်တို့ပြန်ကြားရေးနှင့်အတူမျှဝေပါ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မဆိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်သောတစ်ခုတည်းသောတတိယပါတီများမှတံခါးပေါက် processing သူတို့ရဲ့ E4 ကို Global Gateway မှာခရက်ဒစ်ကဒ်မှတဆင့်ပထမဦးစွာ Data Corporation ဖြစ်ပါသည်, PayPal ကနှင့်အတူ, အစင်းများနှင့်SanDisk®ကော်ပိုရေးရှင်း. ပြန်ကြားရေး E4 ကို Global Gateway မှာထံသို့စေလွှတ်တာဖြစ်ပါတယ်, ဖောက်သည်တစ်ဦးတစ်ဦးကိုဝယ်ယူစေသည်နှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးလုံခြုံငွေပေးငွေယူတံခါးပေါက်ကိုအသုံးပြုဖို့တဲ့အခါမှသာ PayPal ကသို့မဟုတ် Stripe ဟာ. ပထမဦးစွာ Data Corporation (E4 ကို Global Gateway ရဲ့မိဘကုမ္ပဏီ) ကမ်ဘာပျေါတှငျအကြီးဆုံးခရက်ဒစ်ကဒ်ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်လည်ပတ် 34 ကမ္ဘာတဝှမ်းနိုင်ငံပေါင်း. သင်သည်သူတို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ဒီမှာ. ပထမဦးစွာဒေတာများကိုနှုတ်ဖြင့်သူတို့သတင်းအချက်အလက်မျှဝေပေးပါဘူးမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းနှင့်ကကတ်ထုတ်ပေးသူကုမ္ပဏီများမူဝါဒကဆန့်ကျင်ကြောင်းသိရသည်, သူတို့ကိုမဆိုငွေတောင်းခံသတင်းအချက်အလက်များဝေမျှဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူးအရာ. LC နည်းပညာ E4 ကို Global Gateway မှာသို့မဟုတ်ပထမဦးစွာဒေတာများအားဖြင့်မည်သည့်မူဝါဒက back မနိုင်. ပြန်ကြားရေးဖောက်သည်တစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက် www.LC-Tech.com ထံမှSanDisk®RescuePRO®ဝယ်ယူထားပြီးတဲ့အခါမှသာSanDisk®ကော်ပိုရေးရှင်းမှပို့. SanDisk®ကော်ပိုရေးရှင်းအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် Device ရဲ့ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံတို့အတွက် flash ကိုသိမ်းဆည်းခြင်းကဒ်ထုတ်ကုန်များ၏အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. LC နည်းပညာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာSanDisk® Corporation ကမည်သည့်မူဝါဒက back မနိုင်.
သင်တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူတွေဟာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက်မှတ်ချက်များရှိပါကသင်အကြောင်းကိုကျနော်တို့ရှိသည်ဒေတာကိုတွေ့မြင်သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်. LC-Tech.com မှတ်ချက်များကိုယူမထားဘူးအဖြစ်, သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူများအရှိ, ကျွန်တော်ဒေါင်းလုပ်ရန်ဧည့်သည်အဘို့ဤမျိုး၏သတင်းအချက်အလက်များရှိသည်မဟုတ်မယ်လို့. ကျနော်တို့ရှိသည်မယ်လို့တစ်ခုတည်းသောသတင်းအချက်အလက်ဆော့ဖ်ဝဲအကဲဖြတ်တောင်းဆိုမှုကိုပုံစံဖြည့်စွက်ခြင်းမှထောက်ပံ့သတင်းအချက်အလက်များပါလိမ့်မယ်, တစ်ထောကျပံ့တောင်းဆိုမှုကိုပုံစံ, ဒါမှမဟုတ်အဆက်အသွယ်ပုံစံ.
ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးပုံစံကိုဖြည့်ပြီဟုဧည့်သည်များအတွက်, ဒေတာသူတို့ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဖွစျလိမျ့မညျ, ပုံစံဖြည့်စွက်၏အချိန်မှာသူတို့ကိုတာဝန်ပေးကိုမဆို IP လိပ်စာများနှင့်သူတို့အသုံးပြုတဲ့ browser များ၏ User-agent String. အဆိုပါဧည့်သည်များအားဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်အဖြစ်ဒေတာ၏ကျန်သည်အများသုံး.
ဖောက်သည်များပေးဆောင်ခြင်းအဘို့အ, ဒီလည်းပရိုဖိုင်းကိုသတင်းအချက်အလက်နှင့် download, ပါဝငျမညျ, ငွေပေးချေမှု, နှင့်လက်မှတ်သမိုင်းနဲ့ထောကျပံ့.
*** သင်တို့သည်လည်း "မမေ့လျော့ဖို့" တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်ပတ်သက်ငါတို့သည်မဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ် data တွေကိုဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မယ်.
သို့သျောလညျး, သငျသညျငါတို့ဥစ်စာတစ်ပေးဆောင်ဖောက်သည်လျှင်, နှင့်ငါတို့နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ထားပြီးတဲ့ software ကိုလိုင်စင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စကနေသင်ပယ်ဖျက်မယ်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တစ်ဦးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု၌သင်တို့ကိုကူညီနိုင်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စ၌သင်တို့ကိုတက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်, လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး, သို့မဟုတ်အခြားကိစ္စ. ဒါကြောင့်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဒေတာဘေ့စထဲကနေပယ်ဖျက်ရေးတောင်းဆိုကြသောအခါကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားကျေးဇူးပြုပြီး.
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ကာလအတွက်, ဒီဥရောပသမဂ္ဂအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များနှင့်သက်ဆိုင်, အထွေထွေဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အညီ (GDPR).
ထို့အပြင်, ဇန်နဝါရီလ၏အဖြစ် 1, 2020, ဒီကိုလည်းအသစ်ပြဋ္ဌာန်းဖို့လျှောက်ထားပါလိမ့်မယ် ကယ်လီဖိုးနီးယားစားသုံးသူသီးသန့်လုံခြုံရေးအက်ဥပဒေ.
access ကိုရှာသောသူတစ်ဦးချင်း, သို့မဟုတ်သူကိုမှန်ကန်သောဖို့ရှာကြံ, ပြုပြင်သည်, သို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ရန်တိဒေတာ, ရန်သူ / သူမ၏မေးမြန်းချက်ကိုညွှန်ကြားသင့်ပါတယ် support@lc-tech.com.
ကျနော်တို့ကကျိုးကြောင်းဆီလျော်အချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းတုံ့ပြန်မည်, not to exceed one week.
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ကာလအတွက်, ဒီဥရောပသမဂ္ဂအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များနှင့်သက်ဆိုင်, အထွေထွေဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အညီ (GDPR), နှင့်အဖြစ်ဇန်နဝါရီလ 1, 2020, ထို့အပြင်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှနေထိုင်သူများအတွက်မှ persuant ကယ်လီဖိုးနီးယားစားသုံးသူသီးသန့်လုံခြုံရေးအက်ဥပဒေ.
ဖောက်သည်ဒေတာကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဘယ်မှာမဆိုဖြစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်သင့်ပါတယ်, ခိုး, သို့မဟုတ်အလားအလာအန္တရာယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒကနောက်မထက်ကိုအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်သတိပေးရန်ဖြစ်ပါသည် 48 ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့နာရီအဖြစ်အပျက်၏သတိပြုမိဖြစ်လာ. ငါတို့သည်လည်းမဆိုလိုအပ်သောဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအခွင့်အာဏာမှထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်တင်ပြပါလိမ့်မည်. ကျနော်တို့ဒီလိုမဆို End-user အကြောင်းကြားစာများအဖြစ်လာမယ့်ခြေလှမ်းတွေကိုဆုံးဖြတ်ရန်ထိခိုက်မည်သည့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်အနာဂတ်အတွက်မဆိုအလားတူဖြစ်ရပ်ကိုရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လို.
ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု – Service@LC-Tech.com
subscription ကို Cancel – Unsubscribe@LC-Tech.com
ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း – သေဆုံးသူအခမဲ့ (866) 603-2195
FirstData ဆက်သွယ်ပါ – ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ